Junedin Sadoo Wajjira Barnoota Diigun Oromoon akka doomuu goodhe kutaa 4faa
Hordoftoota qoophi kan torban lamaf isiin dura turu kootif dhifama; sababIn tureef ilee Junedin Sadoo erga bareefama keenya dubisee asii rifatee ol gadii katee walga’ii gegesa waan tureef ani ilee walga’ii isaa kan fagooti hordoofun ture. Junedin Sado Ethiopian Hongee tu rukutee malee beelaa hin qabduu jeedhe Uummata Miliyoona 5 ta’uu qoonqoon dhumma jiru irrati nama qoosuu keessa isaa tokko. Torbee kan amoo firra isaa yerro dheera kan tatee Genet Zuwde waliin ta’uun yakkota wagoota darbee ishee waliin dalaga turee itifufun lafa Oromiyaa daldaltoota India fi Shek Alemudiif hiraa jiruu. Genet Zeuwde akkuma lafa Abba isheti India tesee hectara 500,000 daldaltota kanaf yamuu keentuu Junedin Sado ilee biyya Oromiya abba hin qabnee kan fi Mootummaa Oromiya bana jiru kan iti fayadamee sharka isaa Shek Ali Alemudiinf hectara 500,000 badhasuuf qoophi irra jira. Lafa abba hin qabnee argatan email lafa hiraa jiru. Yaaki kun hundi isaa lubu Junedin Sado faa isaan kafachisee ijoolee fixee ijolee isaan gaga’uuu mala. Oromoo irrati Genet Zeuwde fi Junedin Sadoo yaaki isaan dalagan Melese Zenawi caalaa ta’uu isaa raggalee heeduu qabna. Jundein Sado Genet Zewude waliin yaaka hin Oromiyaa irrati hin dalagiin hin jiru. Uummata irraa dhalatee TPLF gamachisuuf jeecha domsaa ture, gababati qabxilee lammiin Oromoo beekuu qabu isiin dhammna:-
Kitabi akka ijoolee Oromoo hin geenye goodhe;
Kitabi baratoota Oromoof maxanfamee mana maxansa keessa yerro dheeraa irraga turee booda Oromiyaa keessati rabsamuu dhisee Bhardar fi Dabrabrihan deemee Magaziina keessa fi gamoo keessati bokka fi hantutan kaka baduu gosisan maliif??. Deebin isaa Jundein Sado fi Genet Zeuwdef dhisa. Kitableen Welegaa fi Haragteeti rabsamuu qaban maliif Bhardar fi Dabrabrihan deeman jeedhamee Walga’ii Hojetoon Oromiya bara 2003 yamuu gafatan Junedin Sadoo kun Olola ABOti jeedhe I/G/Birroo Barnoota yamuusi obboo Harun Husen garuu kitabi kun bakka jeedhamee deemuu isaa amanee; kitaba kana kan achtii erge Minstera Barumsa Jalati wajjira Maxanssa fi rabsaa kitabooleti jeechun dhuga ba’ee ture. Ijoolee Oromo Biyya Ethiopia keessati akka lammii lamafati lakkawaman mirga dhabani yerro ijoolee Tigre Kitaba gosaa hunda, kuta 1 kassan hanga 12ti gutuman gututi argtan itti barantan an keenya atmiti kaka isaan baracha jiran hundi ni beekna. Wara garaf jeecha TPLFti heerumee irra kan hafee.
Bajeeta Birro Barnoota Mega Interprazii Samsisee;
Walga’iidhuma Hojeetan Oromiyya 2003 gegese kan irrati mani Maxxansa Megga Azeb Mesfin gegefamuu sun kitaba Oromiyaaf maxansuuf wadda galee qarshi milyoona 17 keenamef ilee Kitaba maxxansee nu keenu dhisee malaqa keenya dhamma biirafi olchatee jira kun dhibban irrati nu goodhamuu qaba jeechuun hojeetoon biirroo barnoota yaada isaan dhiyeessanf Junedin deebi tokko ilee hin latiin darbee; isaa boodee waan ta’ee hojetoota icittii kan beekanf Ogana birroo Barnoota Harun Husen achi ari’aan. Waan nama gadisisu Malaqi jeedhamee sun dhosuuf amoo Kitabbilee maxanfamuuf deeman sun Nationalstoota Oromoon kan qoophee saba Oromoo bilisummaaf kan kakasuu waan ta’ee kitabii maxanfamee kun gubamee kitabbi biroonTigrootan akka qoopha’uu godhamee. Tigroota qoophessanf Megga mana maxansaf Bajeeta harran kaka ramadamuu goodhamee. Hanga Kitabbi Haran qoophee maxanfamuti ijoole Oromo kitaba hin qabdu.
Waggota kana hunda ijoolee Oromoo kitaba tokko malee barachuuf dirqama turan birroo baroota Oromiya bakka kufama kitaba kessa kitabii hafee gazeexan ilee hin jiru ture kan ijan arginee ture.
Biyya Tigray keessati Kitabbilee Barumsaf rabsaman sadarka adunya kan qoopha’aan; barataan hundi kitaboolee gossa hunda mata matan isaati kan rabsamuuf yamuu ta’uu, baratoon Naannoo Oromiyaa garu kitaba heedu isaa ijan ilee utuu hin argine barmsa kan xumuran yamuu ta’uu, kan amoo ijolee 20 kitabi tokko walti yamuu keenyamuuf arginee jira. Barsisan leenjigi ga’aa hin qabnee, mana barumsaa teesoo ykn Minjaala hin qabnee, ijoolee dhagga irra teese baratuu kan irrati amoo Kitaba tokko ilee bakka hin jireeti Libirary ykn Man kitaba bakka hin jireeti barmsa atamituu Oromiyaa keessati deema jira lata? Torban darbee Ministera Barnnota Ethiopia wayee hanqina qulquliina barumsaa qoorannoo dhiyyatee irrati hanga tokko ifaa goochuu yaala turan. Garuu rakko jiruu kassan dubachuuf namii hundi wal sodatee ture. Sababin isaa Barbsisa mana Barumsa sadarka tokkofati kasee hanga Ministera barumsa Genet zeuwdeti dandeeti kan hin qabnee jeedhame kan gaafatamee Meklese Zenawi uni kan barbanuu nu degeruu fi kayyoo keenya deemsisuu isaan malee dadeeti irra dhimaa hin qabnuu jeedhe bara 2004, kanaafu Genet Zeuwde Dandeeti yoo hin qabnee ilee hanga nu degertet Ministera Barumsa tatee itiifufuu qabdi jeedhe ture. Egaa kun bu’aan Geneti Zeuwde beektoon barnnoota kaka ibsaanti Barumsii Ethiopia keessa akka du’eeti lakkawama jeedhan xumuran torban kan keessa.
Mani Maxansaa wajjira Barnoota banamuuf ture danqee Junedin Sado
Oogana biiroo barumsa Haruun Hunsen wagga waggan Megga Kubaniyaf milyoona 5O keenuu manna Biirroo Barnnota Oromiyya keessa lafa gudda jiruu kan irrati mana maxansaa Oromiyya kan mata keenya ijarana jeechuun karoora basee ture; Mani maxansa kun kitaba barumsaa ijolee Oromoo hunda qoopheesee yerron rabsuuf kan danda’uuf, kitaboolee fi karoora hojii mootummaan nannoo Oromiyya maxansifatuu ilee maxansuun ni danda’aa kan jeedhuu qooranno balan dhiyatee ture. Hata’uu malee warii Megga Kubanya yerrodhuma sun Genet Zeuwde ajejan Genati amoo Junedin Sadoo ajejejun Nationalistoota Birroo Barnoota keessa jiran fi Harun Husen ilee atataman kaka argiaman goodhaman. Birroo barnoota Oromiyya irrati duli goodhama turee heedudha yerro biraa amoo akka barbachisa isaati ictii gudaa dhokatee jiruu hunda gadii basuuf qoophdha. Yerro amma kun garuu haali jiru kan nama hayamuu miti , amaf haa buluu.
Siiran barumsaa keessa bareefama wayee Oromoo kan of kessa qabuu jijirsisee;
Siirna barumsa biyya tokko qoopheesu jeechun mal jeechudha??; Kitaba ijoolee Miloona 20 tatuu Oromiya keessa barumsa barachuu qabduu hundaaf kitaba eenyutu bareessaf jeetan yaaduu? Oromoo mee wayee kan yaadan beektuu? ; of keessan ilee egrree ijoolee Oromoo kun mal ta’aa jeetan yaddan beektuu?? Utuu Obboo Ibsaa Gutama na birra jiratee isaa gafadheen deebi isaa isiin bareessa ture, warii asi jira yoon maqa isaan xuqee ilee boori lubu isaanin dabamuu malu Mafiyan Meles fi Azeb Mesfin ganama qaban ajeesuu hin dabadhuu gaaf tokko garuu TV Oromyyati bayeen hunda akka beekuu goodha. Garuu Eenyuutu dubi qooratee ifaa basa??
Gazeexessan dhugga Oromiyaa keessa hin jiran warii dugga dabatan hundi ari’aman jiru ykn hidhaman jiru ykn biyya aritaman Nuhamin Bikila, Zelalem Gemachuu, Shifarawu Ensarmuu, Dhabasa waqjira, Abdisa Abera, Eyob G/Marim Bafaqaduu Morda, Asrati Wadajoo hin jiran. UUUUU mali goona? Erga hundi caalisee gababiseen issinti huma. Ijoolee Oromoo Milyoona 20 barumsa hordofa jirtuu jeedhamee odeefamuuf seera barmusa kan qoophessan kitaba kutaa 1faa-hanga 12faa kan qoophessan expertoota ykn Ogeesoota 4 fi Ogana tokko Bareesituu tokko turan, Ministera barumsaa duda duba gamoo diima tokko keessa foqii 4 irra. Namoon kun hundi isaan Komputera hin qaban Baresitutu Komputera tokko qaba ture. Namoon kun amoo dandeeti qabu malee lenjii komputera fayadmuu ilee hin qaban turan. Jarii kun rakko egrree Oromoo mudachuu maluu waan beekanf gaafi hunda dhisan waan danda’aan hunda qoofa isaan hojeecha turan. Komputera gargarsan ilee gafachuu ni sodatan. Sabab isaa Bareesituun komputrra qabdi isiin dhunfa keessati maliif isiin barbachisee harkan bareesati isheeti keena jeedhaman.
Waan nama dhibuu keessa komputri dhiisaati waan irrati bareessan waraqa adii hin qaban turan. Jarii kun lubun jiruu hin dabatan malee; inni tokko qoofa keenya ijoolee Oromoo Milyona 20 tajajiluu hin dandeenyuu Komputera ilee hin qabnuu, leenji ilee hin qabnuu jeedhe mufatee Addisa Abeba University galee, inni tooko amo TVT Egensyi Biiroo barnnota keessati ogana ta’ee deemee; nami lama hafan amoo wajjira sun kessa ariataman biiroo barnnota Oromiyaa cinnaa ti kutaa tokko keessati darbataman. Junedin Sado kun soba? Biirroon Baroota Oromiyaa Kitabbolee ijoolee Oromoof barbachisan sadarka Tigray fakkatuun qophyee rabsameef jira??; Dictionary ykn Gubboon Afaan Oromoo hikuu ga’aan qoophyee jioolee Oromoof ykn Mana barumsaf rabsamee jira? Mani kitaba Oromiyaa keessa jira? , Ogesoota seera baroota Oromiyya qoophessan fi kitaboota adda adda qoophessan kununsuun Komputera amaya, labtop fi USB GB heedu qaba fi Konkolata itti qooran gegesan dhufan isaanfi keenameef soda tokko malee dandeeti isaantiin waan ijoolee Oromoo gargaruu qabuu kaka qoophessan goodhamuu yalamee hin beekuu. Namoon kun cimminuma isaan hojeecha jiru malee Lenjii fi muxannoo biyaa birra argatani hin beekan. Muxannoo biyya ala deemnee qoorannee waa hojeena jeedhan Junedin yamuu gafaantn, Tigray deemtani muxannoo yoo argatan yoomi isinti xinatee jeechun afaan isaa jala sunin iti balaqamee. Yaa uumata Oromoo baratoota Oromiyaa keessa jiran hundaf kutaa 1faa kasse hanga Kuta 12faati, Heerga, Afaan Oromoo; Afaan English; Seena, Biology, Kemstrii, Fiziksii, sport kkf hunda qoophesssun hojii nama 3 tii kenan komputera tokko malee qoophessa jeechuun yakka moo yakka miti?. Oromoo fi Oromyaa domsuff itti xiyefatamee waan hojeetama jiru ta’uu isaa Ogeesoon rakko isaan irra jiru hubatani waan dada’aan qofa hojeeta turan sun gaaf tokko ragga ba’uu. Maliif kun goodhemee? Enyuu kan goodha? Kan ajeejuu diina keenya yerro Dheeraa kan tatee Genet Zeuwde (yoditi guditi) kan raawwachisu ilma Oromoo garaf bulee ajejamtuu akka horii Junedin Sado fi wara gartuu isaatii.
Universitylee bara dargiti kassan banamuu turen dabalatee gaaf ummata ukmasee;
Junedin Sado Yerro Universityn biyya Ethiopia keessati ijaramuu Oromiya keessati gartuuu kan bara dargii ilee jiramuuf turan fi karoora qabatan turn kaka Nejoo Geology fi General university ijaramuuf ture Junedi Sado fi Oromiyan hanga amati fila isaa dhoksan jiru. Bara jirenya keenya keessa Neqamtee fi Gimbi Mizan Tefri waliin madaluuf yerro rakkanee kanati OPDOn ani Oogana Oromooti jeedhe dubachuun yaakaa Junedin Sado MIzan-Teppi university deeme muxxannoo fudhachuu qaba. Nami kun Univesity ijoolee Oromoof Oromiyaa keessati ijaruu utuu hin tanee jioolee Oromoo kaka isheen University keessa ariamtuu goochudha, ture hojiin isaa.
Junedin Sado Preezdaant Oromiya ta’ee utuu jiru yerro jiooleen Oromoo University Finfinneti 600 ari’aman; ijoole kuman lakkawaman Kampasi keessa baqatan qoonqoon fi bakka bultii dhaban rakkatani waldalan Mekan Yesus gulalee fi Macca fi Tulamn, waldan Waqeefana fi namoon dhunfa ijoolee dukka rakkatan Junedin garuu Baratoon Oromoo gutuuma University biyya keessa jira 3,000 Oromiyaaf waan ga’aanf wari Finfinnee University 600 yoo ari’aman homma miti jeechun murtee Genet Zeuwde(Yooditi Guditi) raggasisee ture. Ijoole Oromoo wagga waggan Universty Meqeleti yamuu ajeefaman isaan caalisan barumsa isaan hin baratani wayee Oromiyaa maltuu falmadha isaan jeedhe jeechuun lubu Baratoota Oromooti qoosaa ture Jenedin Sado. Junedin Sado Board daraktra ta’ee minda ji’aa ji’aan kan iti nyatuu University Adama keessati ijoole Oromoo iraa dararan utuu hin ga’iin wagga tokko ilee darbee hin bekuu. Ijoole Oromoo biyya isaan keessati universty hunda keessati yerro ijoolee Tigrayn dorsfaman deebin Junedin Sado jibinsa Tigre irra qabanf rakko dhalchuu mal enyuu ilee isaan xuqee hin beekuu ka jeedhu ture. Garuu ijoolen Oromoo University hunda keessati waan isaan irra ga’uu gaaf tokko dubachuun isaan hin oluu, Uummani Oromoo Junedin Sado mana murtiti dhiyeesee gafachuu isaa ilee hin oluu.
Yerro yeron Oganoota birroo Barnoota jijiruun nama fi hojii tasgabii dhorka ture Junedin Sado ;
Genat Zeuwde akka ashikara isheeti kan iti fayadamtuu Junedin Sadoti malee dhiira sanyii dhirra Waljjiira Rudda yoo argituu Genet Zeuwde fincaan of irrati fincooftuu turtee. Genet Zeuwde jibba Oromiyya irra qabduun erga Waljjiira Rudaa itigafatamuma Birroo barnoota irra kara Melese Zenawi kasiftee booda wara kan ji’aa 3 sadiin Oogannoota jijirsisun Biroon Barumsa Oromyaa tasgabii dhabee Oromoon akka domuu goocha turete, bifaa dhiraa kan qabuu sodan isaa warabessa kan caaluu yaaka Genet Zeuwde Oromiyaa irrati kan rawwatuu Junedin mormii tokko malee rawwachisa ture. Haaluma kana Oganoon Waljjira Rudaa, Harun Husen, Masfin Abebe, Melese Dayessa; Salamon Abebe, Daraje Asfaw kkf 20 waggota 6 keessati wal jijiran kun kan goodhameef kayyoo mata isaa qaba. Kayyon kun ijoolee Oromoo domsuuf. Yero gababan biroo Barumsa Oromiyaa irra kan bu’ee Mesfin Abebe yamuu ta’uu Mesefin Abebe Oogana wajjira ta’uun hafee Darktera Mana barumsa sadarka tokkoffa ta’uu hin danda’uu jeechun Junedin Sado yamuu dubatu dhageenye. Dura maliif akka mudee garuu hin beeknamuu, Ittiansun utuu mudamuu isaan hin argni molqamuu isaa kan dhageenye Salamon Abebe Oromummaa waliin waan tokko wal irra kan hin qabnee Abban isaa Abebe Tasma Amhara Hatii isaa amoo Tigree irra dhalatee Barumsaa Oromiyya keesati dagagsuuf mudamuun Oromoof yaduu utuu hin tanee Oromoo baleesuuf ture. Hata’uu malee Salamon Abebe hojin jira jeedhe Adamati galee foon diimana fi wisky haleeluu egalee ji’aa 3 booda achii deeme utuu waraqa tokko ilee hin malateesin. Ama isiinti heedumesuu caala warii dhimma kana beektan hundi rakko ta’uu akka iti qoophftanf malee guyyan dubanuu hara miti; garuu yaaka nu irrati dalagala turee hunda beekuuf gaaf tokko saxiluuf of qophessa.
Junedin Sado uummani ini kessa dhalatee uummani Arsi goocha yaakama kana amanta uumataa Oromoo gutuu birra dhaba jira. Gosi fi jarsii nama kan gorsuu qabu turan, garuu Junedin Gorsa gosa fi jarasaa waan fudhatuu hin fakkatuu Bara 2007-2008 ABO achi dhabamsisa jeechuun Melese irra eergama fudhatee Minsootati(USA) yerro Afur deedebya ture. Ijoolee Arsi ABO keessa jiran baseen TPLFti galcha jeechuun kara jarsolee dubsa ture, Maakiyaa fi Prof. Bumadin ilee jarsolee fi ijoolee naannoo walti qabaf turan. Ijoole Arsi Hasan Husen, Lencoo Bati, Nuri Dadafo, kkf hunda qunama turan, Junedin jarii kun akka ABO keessa ba’aan goodhe jeedhamee Melese Zenawi irra badhasa hargtuu malee ijoole jijirama Jeete ABO didee batee Ginboti 7 ti galuun ishee amoo Badhasa Junedin Sado irra fudhachisee. Nami kakuu isaa isaa dura ganee yoomi ilee gana bara ba’aa jeedhama. Junedin ABO ture ABO ganee TPLF ta’ee ta’uusi yerro hunda harabi isaa lama jeechun Reporter Kiburi Mininster kan jeedhu keessati suura Junedin ka’ee ture. Ijoole jijirama isaan gorfamte ABO keessa batee isheen kan kunoo asi finfinnee keessati janjoftuu tatee Lichoo Bukura faan, Kan Asmara keessa wal facaftee jeedhama, warii Minsoota amoo Ginboti 7 ti harka ladhatee oduun jeedhu ergaman Junedin K/Aman Kadfir faa mana buna keessa odeesu; yakki Junedin Sadfoo kuta 5 -12 iti fufa.
Bareefama kana bakka (kutaa) 12 qoqonee waan dhiyeesinuuf nu hordofa;
Ittifufa nu hordofa
Falmata Dhugga Cafee Oromiyaa irra